मोटोरोला समाचार: सुरूवात, फोन, ट्याब्लेट र अधिक - Androidsis | Androidsis (पृष्ठ))
मोटोरोला मोटो जी स्टाइलस २०२१ का नयाँ रेन्डरहरूले नयाँ डिजाइनको कुरा गर्छन्
मोटोरोला मोटो जी स्टाइलस २०२१ को नयाँ रेन्डर गरिएका छविहरू एक आकर्षक डिजाइन देखाइएको छ।
यी २१ मोटोरोला मोडेलहरू हुन् जुन एन्ड्रोइड ११ मा अपडेट हुनेछन्
मोटोरोलाले घोषणा गरेको छ कि कुन टर्मिनलहरू २०२० भरि एन्ड्रोइड ११ मा अपडेट हुनेछन्।
मोटो जी स्टाइलस (२०२१) अमेजनद्वारा देखा पर्दछ र नयाँ डाटा प्रकट गर्दछ
मोटो जी स्टाइलस (२०२१) अमेजन अमेरिकाले आफ्नो डिजाइन र टेक्निकल शीटको नयाँ डाटा खुलासा गरेको देखा पर्‍यो। तिनीहरूको फाइदाहरूको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्।
मोटोरोला निओ १० phone हर्ट्ज प्यानल भएको पहिलो फोन हुनेछ
मोटोरोला निओ पहिले नै आफ्नो पहिलो विशिष्टता र स्क्रीन ताजा दर हाइलाइट देखाईएको छ। हामी उहाँ बारे सबै कुरा प्रकट।
मोटो E7 को विशेषताहरूको डिजाईन र अंश फिल्टर गर्नुहोस्
हालसालै मोटोरोलाले नयाँ उत्पादनहरू सुरू गर्न रोकेको छैन। केही महिना अघि हामीले तपाईंलाई मोटो E7 प्लस, टर्मिनलको बारेमा बतायौं ...
मोटो जी Power पावर र मोटो जी G जी ठूला स्क्रीन र विशाल ब्याट्रीको साथ घोषित गरीएको छ
मोटोरोलाले नयाँ मोटो जी Power पावर र मोटो जी G जी को घोषणा गर्‍यो, दुई ठूला ब्याट्रीको मिड-रेंज स्मार्टफोन। दुबै टर्मिनलहरूका सबै विवरणहरू जान्नुहोस्।
मोटो जी G जी: यसका मुख्य सुविधाहरू र स्पेसिफिकेसन लीक भयो
मोटोरोला मोटो जी G जी का प्रमुख सुविधाहरू र प्राविधिक विवरण लीक भएको छ। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
मोटोरोला एज + यसको पुन: उत्पादनको लागि एक राम्रो विकल्प हो यसको स्टेरियो स्पिकरलाई [समीक्षा]
DxOMark ले मोटोरोला एज + को परीक्षण गर्‍यो कि यो ध्वनि र रेकर्डि। कोटीहरूमा कती राम्रो छ भनेर निर्धारण गर्न।
यसको आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको एक हप्ता पछि नयाँ मोटोरोला मोटो जी9प्लस २ noweयुरोमा स्पेनमा उपलब्ध छ।
मोटो E7 प्लस स्न्यापड्रैगन 460 र 5.000 mAh ब्याट्री को साथ घोषणा गरीएको छ
मोटोरोलाले नयाँ मोटो E7 प्लस एक मिड-रेंज प्रोसेसर र २ दिन सम्मको उच्च ब्याट्री जीवनको साथ प्रस्तुत गरेको छ। थप सिक।
मोटोरोला मोटो G9 प्लस अब आधिकारिक छ। यसको सबै सुविधाहरू, प्राविधिक विवरणहरू र मूल्य र उपलब्धताको विवरणहरू जान्नुहोस्।
मोटोरोला रजर G जी नयाँ फोल्डेबल स्मार्टफोन हो जुन क्वालकमको स्नैपड्रैगन5जी र अधिकको साथ सुरू गरीएको छ।
मोटोरोलाले आधिकारिक रूपमा SD9 र एक ठूलो उच्च क्षमताको ब्याट्रीको साथ नयाँ मोटो G662 प्ले घोषणा गर्‍यो।
मोटो E7 चाँडै नै 5.000,००० mAh ब्याट्रीको साथ आउनेछ: यसको मूल्य र अधिक विवरणहरू खुलासा भएको छ
मोटोरोला मोटो E7 को ब्याट्री क्षमता फुटेको छ। यसको मुख्य विशिष्टता र सुविधाहरू पनि पहिले नै ज्ञात छ।
मोटोरोलाको नयाँ मोटो RAZR 5G फोल्डिंग स्मार्टफोनको रिलीज मिति छ
नयाँ मोटो RAZR 5G फोल्डिंग स्मार्टफोनसँग पहिले नै आधिकारिक सुरुवात मिति छ, जुन सेप्टेम्बरको लागि निर्धारित गरिएको छ।
मोटोरोलाले मोटो जी Plus प्लस एफसीसी मार्फत समय भन्दा अगाडि सर्छ र केहि हार्डवेयर सुविधाहरू, साथै यसको ब्याट्री प्रकट गर्दछ।
मोटो E7 क्यारियरमा आधिकारिक रूपमा घोषणा हुनु अघि देखाइन्छ
मोटो E7 कम्पनी द्वारा प्रस्तुत गर्नु अघि पूर्ण रूपमा चुहावट भयो, जसले यसलाई एन्ट्री-लेभल उपकरणको रूपमा सुरू गर्नेछ।
मोटो G9 प्ले को पहिलो विशिष्टता Geekbench मा देख्न सकिन्छ
गीकबेन्चले मोटोरोलाको मोटो जी Play प्ले, आउँदो मध्य दायरा मध्येको एकको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको बारेमा धेरै रोचक तथ्यहरू प्रकट गरेको छ।
मोटो जी G जी प्लस आधिकारिक हो:5″ स्क्रीन, G जी कनेक्टिविटी र २ दिन सम्मको स्वायत्तता
मोटोरोलाले नयाँ मोटो जी G जी प्लस प्रस्तुत गरेको छ, ठूलो स्मार्टफोनले २ दिन सम्म स्वायत्तताको शक्तिशाली ब्याट्री सहितको स्मार्टफोन।
मोटोरोला वन फ्यूजन घोषित: HD + स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 710 र उच्च क्षमता ब्याट्री
मोटोरोलाले वन फ्यूजन प्रस्तुत गरेको छ, विनाशकारी स्वायत्ततासहित एक मिड-रेंज स्मार्टफोन र एक दिन भन्दा बढीको लागि जारी गर्न जारी गरियो।
मोटो जी G जी स्नैपड्रैगन5र H ० हर्ट्ज प्यानलको साथ आउँदछ, त्यहाँ प्लस भेरियन्ट हुनेछ
मोटोरोलाले जुलाई7मा दुई नयाँ फोन प्रस्तुत गर्नेछ, जस मध्ये पहिलो मोटो जी G जी हुनेछ, जबकि त्यहाँ प्लस भेरियन्ट हुनेछ।
मोटो G अगाडिको ढोकाबाट फर्कन्छ, र यो यसको डिजाइन हो
हामी तपाईंलाई मोटो जी को पहिलो विवरण बताउँछौं,
मोटो एज लाइट एफसीसी द्वारा प्रमाणित छ: यो एक5जी फोन हुनेछ
एफसीसीले मोटोरो एज लाइट मोटोरोलाबाट नयाँ घटक देखाउँदछ। फोनको पहिलो सम्भावित विवरणहरू ज्ञात छन्।
मोटोरोलाको दोस्रो-पीढी RAZR २०2021 मा ढिला भयो
मोटो RAZR को दोस्रो जेनेरेसन, कोरोनाभाइरस को कारण भएको महामारीको कारण २०२१ सम्म यसको प्रक्षेपण ढिला भयो।
मोटो G7 प्ले एन्ड्रोइड १० प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
बिस्तारै, लेनोभोको स्वामित्वमा रहेको अमेरिकी निर्माताले यसको मोटो जी परिवार अपडेट गर्न जारी राख्छ। हामीले तपाईंलाई पहिल्यै ...
मोटो जी Power पावरले एन्ड्रोइड १० प्राप्त गर्न सुरु गर्दछ
मोटो जी Power पावरले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एन्ड्रोइड १० अपडेट प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेको छ, एउटा अपडेट जुन हाल ब्राजिलमा मात्र उपलब्ध छ
मोटोरोला वन फ्यूजन + नयाँ मोबाइल हो जुन स्नापड्रैगन 730० र MP 64 MP क्यामेराको साथ 300०० भन्दा कम युरोको लागि शुरू गरियो।
मोटोरोलाले नयाँ स्मार्टफोन ल्याएको छ जसमा क्वालकॉमको स्नैपड्रैगन 730० चिपसेट र MP 64 एमपी क्यामेरा सुविधा मिल्छ। यो एक फ्यूजन + को रूपमा आउँछ।
मोटो E LE नयाँ छविमा देखा पर्दछ र यसको विशिष्टताहरू फिल्टर गरियो
मोटोरोलाले चाँडै नै नयाँ मोटो ई एलई घोषणा गर्नेछ, विभिन्न बजारको लागि आकर्षक मूल्यको साथ एक प्रविष्टि-स्तर उपकरण।
मोटो ई २०२० र मोटो जी फास्ट आधिकारिक हुन्: दुई नयाँ प्रविष्टि-स्तर एन्ड्रोइड १०
मोटोरोलाले दुई नयाँ प्रविष्टि-स्तर फोनहरू प्रस्तुत गरेको छ, मोटो जी फास्ट र मोटो ई २०२०। एन्ड्रोइड १० सहितका दुई उपकरणहरू।
मोटोरोला RAZR २ यी खबरका साथ सेप्टेम्बरमा आइपुग्नेछ
हामी मोटोरोलाको फोल्डिंग स्मार्टफोन, RAZR को दोस्रो पुस्ता के हुनेछ सम्बन्धित सम्बन्धित पहिलो अफवाहहरु थाहा छ
मोटो G7 एन्ड्रोइड १० प्राप्त गर्न थाल्छ
मोटो जी of को एन्ड्रोइड १० मा लामो प्रतीक्षारत अपडेट ब्राजीलमा उपलब्ध हुन शुरू भएको छ, तर यसले विश्वमा पुग्न केहि दिन लिन सक्दछ।
मोटोरोलाले चाहान्छ कि हामी RAZR जति सक्दो थोरै Android to मा अपडेटको साथ खोल्न सक्छौं
मोटोरोला RAZR का लागि एन्ड्रोइड १० अपडेट उपलब्ध भएको छ र बाह्य स्क्रिनमा अधिक कार्यक्षमता प्रस्ताव गर्नमा केन्द्रित छ।
मोटो एज र मोटो एज + आधिकारिक हुन्: दुई नयाँ उच्च-अन्त G जी उपकरणहरू
मोटोरोलाले नयाँ मोटो एज र मोटो एज +, दुई प्रिमियम रेंज स्मार्टफोन प्रस्तुत गरेको छ। दुबै युरोपेली बजारमा पुग्नेछन्।
मोटो एज + कम्पनीको आधिकारिक टिजरमा देखा पर्दछ, अप्रिल २२ मा प्रस्तुत गरिनेछ
मोटोरोलाले मोटो एज र मोटो एज + लगभग एक हप्तामा घोषणा गर्नेछ। हामी आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनु अघि पहिलो विशिष्टताहरू जान्दछौं।
भेरिजनको मोटो Z4 अन्तमा एन्ड्रोइड १० प्राप्त गर्दछ
भेरीजनले अब नयाँ मोटो एन्ड्रोइड १० फर्मवेयर बन्डल प्रस्तुत गर्दैछ यसको मोटो Z10 मध्य-दायरामा लक गरिएका इकाईहरूका लागि।
मोटोरोला वनले एन्ड्रोइड १० अपडेट पाउँदैछ
एन्ड्रोइड १० अझै पनी सबै फोनमा पुग्न सक्दैन, तर अलि अलि गर्दै गरेको छ, र अब मोटोरोला वनमा एक नजर राखेको छ।
मोटो G8 पावर लाइट आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनु अघि धेरै छविहरूमा देखाईएको छ, मूल्य र उपलब्धता पनि ज्ञात छ।
बुबाको दिनको लागि सबै भन्दा राम्रो सस्तो स्मार्टफोन
आज हामी तपाईलाई धेरै सस्तो स्मार्टफोनको बारेमा धेरै रोचक शीर्ष cheap ल्याउँछौं जुन तपाईं फादर्स डेको लागि दिन सक्नुहुन्छ
मोटोरोलाको मोटो Z4 ले एन्ड्रोइड १० अपडेट प्राप्त गर्न सुरु गर्दछ
मोटोरोलाले एन्ड्रोइड १० अपडेट मोटोरोलाको मोटो जेड to मा नयाँ ओटीए मार्फत प्रस्ताव गर्न शुरू गर्यो जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलँदैछ।
मोटोरोला मोटो एज + क्यामेरा चश्मा चालू: 108 MP सेन्सर दृष्टिमा
मोटोरोला मोटो एज + को बारेमा नयाँ जानकारी प्रकाशमा आएको छ। यो तपाईंको क्यामेराको विशिष्टताको बारेमा कुरा गर्दछ।
मोटोरोला एज, यो अर्को मोटोरोला फ्लैगशिप हुनेछ
हामी तपाईंलाई मोटोरोला किनारको पहिलो विवरणहरू बताउँछौं, मोटोरोलाको अर्को फ्ल्यागशिप र जुन टर्मिनलमा चढ्ने शक्तिशाली हार्डवेयरको लागि बाहिर खडा हुनेछ।
मोटोरोला वन एक्शनले एन्ड्रोइड १० प्राप्त गर्न सुरू गर्यो
लेनोभोले पहिले नै मोटोरोला वन एक्शनको लागि एन्ड्रोइड १० अपडेट आउट गर्न सुरू गरिसकेको छ। यो एक धेरै नयाँ सुविधाहरूको साथ आउँछ।
मोटो जी स्टाइलस र मोटो जी Power पावर आधिकारिक रूपमा घोषित छन्
मोटोरोलाले आफ्नो दुई नयाँ मध्य रेंज स्मार्टफोन मोटो जी स्टाइलस र मोटो जी Power पावरको घोषणा गर्‍यो। दुबै वसन्तमा आइपुग्छन्।
मोटोरोलाको मोटो जी स्टाइलस ना naked्गो छ: यसको मुख्य विशिष्टताहरू प्रकट भएको छ [+ रेन्डरहरू]
मोटोरोला मोटो जी स्टाइलसको मुख्य सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू केही छविहरूको साथमा पनि चुहावट भयो।
दिनको सम्झौता: सस्तो मोटोरोला वन एक्शन १०० युरो पाउनुहोस्
उत्तम मूल्यमा मोटोरोला वन एक्शन खरीद गर्न यो सम्झौता छुटाउनुहोस्। र अब तपाईले यसलाई १०० यूरो सस्तो अमेजनमा पाउन सक्नुहुन्छ।
मानिएको मोटोरोला मोटो Z5 एक विशाल 5000००० mAh ब्याट्रीको साथ प्रमाणित गरिएको छ
FCC अनुमोदन निकायको डाटाबेसबाट नयाँ लीक देखा पर्‍यो। यो प्रमाणित गरिएको मोटो Z5 भएको हो।
मोटोरोलाले बार्सिलोनामा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस २०२० कार्यक्रम सुरु हुनु अघि धेरै मोबाइल उपकरणहरू प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ।
मोटोरोलाको मोटो जी new नयाँ रेन्डर गरिएका छविहरूमा लीक भएको छ जसले यसको सम्पूर्ण प्रीमियम मिड-रेंज फोन डिजाइन प्रकट गर्दछ।
मोटोरोला एज प्लस स्नीपड्रैगन 865 and र १२ जीबी र्यामको साथ गीकबेन्चको हातबाट पार भयो।
लोकप्रिय गीकबेन्च बेंचमार्कले मोटोरोला एज प्लसलाई यसको डाटाबेसमा स्नैपड्रैगन 865 and र १२ जीबीको र्यामले दर्ता गरेको छ।
निर्माता अनुसार मोटोरोला RAZR को स्क्रीनमा बम्प सामान्य हुनेछ
यस्तो चालमा जसले प्रयोगकर्ताहरूको पक्षमा परिवर्तन गर्न सक्दछ, मोटोरोलाले दाबी गर्दछ कि RAZR स्क्रिन सामान्य प्रयोगको साथ एकान्त महसुस गर्न सक्छ।
एक अप्टिकल स्टाइलसको साथ एक नयाँ मोटोरोला फोन को एक छवि लीक भएको छ, यो सुविधाको साथ आउने यो पहिलो मोडेल हुनेछ।
मोटोरोलाले अधिक शक्तिशाली प्रोसेसरको साथ रजर २०१ 2019 को संस्करण सुरू गर्नेछ जुन नयाँ उच्च-स्पीड नेटवर्कसँग उपयुक्त हुनको लागि G जी मोडम हुनेछ।
मोटोरोला मोटो G10 प्लस को लागी एन्ड्रोइड १० अपडेट ब्राजिलमा उपलब्ध हुन शुरू भएको छ, त्यसैले बाँकी देशहरूमा पुग्न लामो समय लिन हुँदैन।
मोटोरोला रजरले यसको बजार प्रक्षेपण ढिला गर्दछ
मोटोरोला रेजरले बजारमा पुग्न केहि बेर लिन सक्दछ किनभने यो संयुक्त राज्यमा उच्च मागको कारणले प्राप्त भएको छ र अब जनवरीमा आइपुग्नेछ।
मोटोरोला रजर जनवरी मा स्पेन आउने छ
जुन वर्ष हामी अन्त्य गर्दैछौं त्यो मोबाईल फोल्ड गर्ने वर्ष भएको छ। सामसु्गले पहिले प्रस्तुत गर्‍यो ...
एन्ड्रोइड १० को स्थिर संस्करण मोटोरोला वन पावरमा आउँदछ
मोटोरोला वन पावरले क्रमिक रूपमा यो अवस्थित अवस्थित देशहरूमा Android को नयाँ संस्करण प्राप्त गर्नेछ।
मोटोरोला वन हाइपर प्रक्षेपण अगाडि चित्रहरूमा चित्रित
मोटोरोलाले आउँदो केहि घण्टामा नयाँ वन हाइपर प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ, यो उपकरण जसले यसको पप-अप क्यामेराको लागि जनताको ध्यान आकर्षण गर्ने छ।
मोटोरोला वन हाइपर डिसेम्बरमा प्रस्तुत गरिनेछ
मोटोरोला वन हाइपर डिसेम्बर on मा ब्राजिलमा आयोजित कार्यक्रममा आधिकारिक हुनेछ किनकि यो नेटवर्कमा पहिले नै चुहावट भयो। दायरा भित्र नयाँ फोन।
मोटोरोला रजरको स्पेनमा पहिले नै पुष्टि मूल्य छ
मोटोरोलाले स्पेनमा मोटोरोला रजरको आधिकारिक बिक्री मूल्य पुष्टि गर्दछ र यो बजारमा हिट गर्न सस्तो फोन हुने फोन हुनेछ।
राम्रो क्यामेराको साथ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ? मोटोरोला वन जूम पहिले भन्दा सस्तो छ
राम्रो क्यामेराको साथ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ? मोटोरोला वन जुम अमेजनमा पहिलेभन्दा सस्तो छ, त्यसैले यस अवसरलाई नबिर्सनुहोस्।
नयाँ मोटोरोला RAZR का आधिकारिक छवि लीक गरियो, नयाँ फोल्डिंग स्मार्टफोन जुन बजारमा हिट हुन्छ
मोटोरोला RAZR को नयाँ पुस्ताको आधिकारिक प्रस्तुती हुनुभन्दा केही दिन अघि, ठूलो संख्यामा छविहरू फिल्टर गरिएको छ जुन हामीलाई यसको सबै वैभवमा डिजाइन देखाउँदछ।
मोटोरोला वन म्याक्रो आधिकारिक रूपमा स्पेन मा शुरू गरिएको छ
स्पेनमा मोटोरोला वन म्याक्रोको आधिकारिक सुरुवातका बारे थप जानकारी लिनुहोस् किनकि कम्पनी आफैंले आधिकारिक रूपमा यसको वेबसाइटमा घोषणा गरेको छ।
मोटोरोलाले यसको मिड-रेंज र मोटो G8 प्लस र मोटो E6 प्लेको साथ प्रविष्टि नविकरण गर्दछ
मोटोरोलाले भर्खर मोटो G8 प्लस प्रस्तुत गर्‍यो मध्य दायरामा प्रतिस्पर्धा गर्न र मोटो E6 प्लस, प्रविष्टि दायराको लागि। यस लेखमा सबै विवरणहरू।
मोटोरोला वन हाइपर, फर्मको अर्को स्मार्टफोनहरूको नाम
लेनोभोले मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च गर्ने योजना गरिरहेछ जुन बर्षको अन्त्य हुनु अघि मोटोरोला वन हाइपर भनिनेछ।
मोटो E6 खेल को डिजाइन फिल्टर
मोटो E6 प्ले को डिजाइन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्, मोटोरोलाको कम-अन्त दायरा भित्रको नयाँ फोन जुन छिट्टै मार्केटमा हिड्नेछ।
मोटोरोला RAZR सँग पहिले नै एक प्रस्तुतीकरण मिति छ
मोटोरोला RAZR को आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन कम्पनी आफैंले पुष्टि गरिसकेको छ र एक महिनामा आधिकारिक हुनेछ।
मोटोरोला मोटो G8 रिलीज मिति र डिजाइन प्रकट भयो
मोटोरोला मोटो G8 यसको रेन्डर छविहरु मा एक ट्रिपल रियर क्यामेरा फोन को रूप मा देखा पर्‍यो। यसको रिलीज मिति प्रकट भएको छ।
मोटोरोला वन म्याक्रो: म्याक्रो फोटोग्राफीको लागि नयाँ मध्य-दायरा
मोटोरोला वन म्याक्रोको बारेमा सबै पत्ता लगाउनुहोस्, कम्पनीको नयाँ मध्य-दायरा यस मामलामा म्याक्रो फोटोग्राफीको लागि अभिप्रेरित छ र त्यो भारतमा आधिकारिक हो।
स्लाइडिंग क्यामेराको साथ मोटोरोलाको पहिलो फोटोहरू फिल्टर गरिएका छन्
मोटोरोलाको आधिकारिक रूपमा स्लाइड-इन क्यामेरा फोन सुरूवात गर्ने योजनाहरूको बारे अधिक जानकारी लिनुहोस्।
मोटो E6 Plus औपचारिक रूपमा स्पेन मा शुरू गरिएको छ
स्पेनमा मोटो E6 प्लसको आधिकारिक सुरुवातको बारे थप जानकारी लिनुहोस् किनकि मोटोरोलाले आधिकारिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा घोषणा गरिसकेको छ।
मोटोरोला RAZR, फोल्डिंग ढाँचा हामीले अपेक्षा गरेका थियौं
मोटोरोला RAZR, Huawei वा सैमसंग को रूप मा धेरै हल्ला बिना, एक अधिक व्यावहारिक डिजाइन संग तह ढाँचा क्रान्ति गर्न सक्छन्
मोटोरोला RAZR बर्षको अन्त मा प्रस्तुत गरिनेछ
पुष्टिकरणको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् कि मोटोरोला RAZR आधिकारिक रूपमा वर्षको अन्त्य हुन अघि नै प्रस्तुत भैसकेको छ जस्तो कि पहिले नै पुष्टि भइसकेको छ।
मोटो E6s आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ
मोटो E6s को आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप पत्ता लगाउनुहोस्, मोटोरोलाबाट नयाँ कम-अन्त फोन जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ।
मोटो E6s यस सेप्टेम्बर 16 मा आधिकारिक बनाइनेछ
लेनोवोले नयाँ मोटो E6 को साथ भर्खरै जुलाईमा मोटो E श्रृंखला नयाँ बनायो। यो टर्मिनल सस्तो छ ...
मोटोरोला उच्च-फोन फोन पुन: शुरू गर्न
मोटोरोलाको फोनलाई उच्च अन्तको दायरा भित्र पुनः सुरु गर्ने योजनाको बारेमा यसको मुख्य मार्केटिंग अफिसरले पहिले नै पुष्टि गरेको बारेमा फेला पार्नुहोस्।
हालसालैको प्रमाणीकरणका अनुसार मोटोरोला वन म्याक्रोको विकास भइरहेको छ
मोटोरोलाले विगतका वर्षहरूमा यसका मोटो जी श्रेणीमा त्यति केन्द्रित गरेको छैन। हस्ताक्षर, तथ्यलाई बावजुद ...
मोटोरोला वन जुम आधिकारिक रूपमा स्पेन मा शुरू गरिएको छ
यस मोटोरोला वन जूमको आधिकारिक रूपमा स्पेनमा स्पेनमा सुरूवातका बारे थप जानकारी खोज्नुहोस् अमेजनको एलेक्सा सहायकको रूपमा।
मोटोरोला वन जूम: फोटोग्राफी मा मध्यम-सीमा दांव
मोटोरोला वन जुमको पूरा विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन बर्लिनको आईएफए २०१ 2019 मा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र जसको बारे हामी सबै कुरा जान्दछौं।
मोटोरोला वन जूम विशिष्टता लीक
मोटोरोला वन जूमको पूर्ण विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा चुहावट भयो र त्यो आइएफए २०१ presented मा प्रस्तुत छ।
मोटोरोला वन कार्य स्पेन मा शुरू गरिएको छ
स्पेनको मोटोरोला वन एक्शनको बजार प्रक्षेपणको बारे थप जानकारी पाउनुहोस् जुन हामी अब आधिकारिक रूपमा स्टोरहरूमा खरीद गर्न सक्छौं।
मोटो E6 प्लसको पहिलो फोटोहरू फिल्टर गरियो
मोटो E6 प्लसको लीक गरिएको पहिलो फोटोहरूको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन ब्रान्डको यो फोनको डिजाइन के हो भनेर हामीलाई हेर्न अनुमति दिईन्छ।
मोटोरोलाको फोल्ड स्मार्टफोन, RAZR २०१,, सामसु and र हुवावे मोडेलहरू भन्दा सस्तो हुनेछ
भर्खरको चुहावट अनुसार मोटोरोला RAZR २०१ को अनुमानित मूल्य १ 2019०० युरो हुनेछ र २०१ of को अन्त्यमा बजारमा पुग्नेछ।
२०१ Motor मोटोरोला RAZR को बारेमा नयाँ डाटा लीक भयो
नयाँ डेटा पत्ता लगाउनुहोस् जुन मोटोरोला RAZR २०१२ को बारेमा लीक भयो जुन बजारमा पुग्न पहिले नै अलि नजिक भएको देखिन्छ र परिवर्तनहरू ल्याउँदछ।
मोटोरोला वन एक्शन: नयाँ एन्ड्रोइड वन फोन
मोटोरोला वन एक्शनको पूर्ण विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन ब्राजिलमा एक कार्यक्रममा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसक्यो र चाँडै आउँदैछ।
मोटोरोला वन कार्यको पहिले नै प्रस्तुतीकरण मिति छ
मोटोरोला वन एक्शनको प्रस्तुतीकरणका बारे थप जानकारी लिनुहोस् जसको मिति सामाजिक नेटवर्कमा कम्पनी आफैंले पुष्टि गरिसकेको छ।
मोटोरोला वन जूमका सबै प्राविधिक विवरणहरू देखा पर्‍यो
मोटोरोला वन जूम अर्को स्मार्टफोन लेनोवो शुरूआत हुनेछ। त्यसो हुनु अघि यस टर्मिनलका सबै विवरणहरू चुहावट भयो।
मोटो E6: मोटोरोलाको सस्तो मोडेल
मोटो E6 को बजारमा ल्याउनका बारे थप जान्नुहोस्, मोटोरोलाबाट नयाँ कम-अन्त फोन जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ।
मोटोरोला वन एन्ड्रोइड एन्टर्प्राइजमा देखा पर्दछ, र यसको विशिष्टीकरणको पनि
मोटोरोला वन कार्य गुगलको एन्ड्रोइड उद्यम सिफारिश प्लेटफर्म द्वारा सूचीबद्ध गरीएको छ। यसको मुख्य विशिष्टताहरु विस्तृत गरिएको छ।
यो मोटोरोला P50 मा आधिकारिक मूल्य छ
मोटोरोला P50 को मूल्य एक बिक्री घटना मार्फत आधिकारिक बनाइएको छ। योसँग समान मूल्य निर्धारण योजना हुनेछ जुन हामी पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छौं।
मोटोरोला P50 को प्रक्षेपण र मुख्य विशिष्टता आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ
लेनोभोका उपाध्यक्ष चांग चेngले मोटोरोला P50 का अधिकतर विवरणहरू उतारेका छन्, साथसाथै यो कहिले जारी हुन्छ।
मोटोरोलाको मोटो Z4 अन्तिम प्रमुख अपडेटको रूपमा एन्ड्रोइड Q प्राप्त गर्नेछ
एन्ड्रोइड क्यू मध्य दायरा मोटो Z4 प्राप्त गर्न गुगलको स्मार्टफोन अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करण हुनेछ।
मोटो E6 का नयाँ रेन्डरहरू देखा पर्दछ जुन यसको सबै डिजाइन देखाउँदछ र यकिन गर्दछ
मोटोरोला मोटो E6 का केहि नयाँ रेन्डरर छविहरू प्रकाशमा आए। यसले एन्ट्री-स्तर मोबाइलको फिल्टर गरिएको डिजाइनको पुष्टि गर्दछ।
मोटोरोला वन एक्शन पूर्ण रूपमा रेन्डर गरिएका छविहरूमा देखिएको छ
अर्को लेनोभो टर्मिनल सुरु हुने मोटोरोला वन एक्शन, एक स्मार्टफोन हो जुन हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेका छौं ...
मोटोरोला वन एक्शन पूर्ण चश्मा सुरुको अगाडि लीक भयो
मोटोरोला वन एक्शनको पूर्ण विवरणहरू प्रकाशमा आए, र हामी तिनीहरूलाई यो नयाँ अवसरमा प्रकट गर्दछौं। ती सबैलाई चिन्नुहोस्!
गीकबेन्चले मोटो E6 प्लसको केही मुख्य चश्मा देखाउँदछ
मोटो E6 प्लस लेनोवोको स्वामित्वमा रहेको ब्राण्डबाट आउँदै गरेको स्मार्टफोन हो जुन अब गीकबेन्च डाटाबेसमा दर्ता गरिएको छ।
मोटोरोलाले यो मोटो Z4 बल वा मोटो Z4 प्ले जारी गर्दैन पुष्टि गर्दछ
मोटोरोलाले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्यो कि यसले नयाँ मोटो जेड स्मार्टफोन लॉन्च गर्दैन, त्यसैले मोटो जेड Force फोर्स र प्ले मार्केटमा आउँदैन।
मोटोरोला वन एक्शन गीकबेन्च मार्फत जान्छ र यसको केहि विवरणहरू प्रकट गर्दछ
मोटोरोला वन एक्शनले गीकबेन्च बेन्चमार्कमा आफ्नो दृश्य बनाएको छ। त्यहाँ यसले यसको केहि विशेषताहरू र प्राविधिक विवरणहरू प्रकट गरेको छ।
मोटो Z4 स्नैपड्रैगन 675 and6,4 र .XNUMX..XNUMX ″ OLED स्क्रिनको साथ आधिकारिक हो
यसको कन्फिगरेसनमा राम्रो सन्तुलित फोन र जुन हामी मोटोरोलाको मोटो Z4 को रूपमा जान्छौं। जुनमा यो बिक्रीको लागि यसलाई प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
मोटो Z4 ले स्नापड्रैगन gon675 को साथ Geekbench मा यसको foray बनाउँछ
मोटोरोलाको मोटो Z4 अनलाइन परीक्षण प्लेटफर्म Geekbench मा प्रदर्शित गरिएको छ। त्यहाँ उपकरणले यसको केहि विशिष्टीकरणहरूको पुष्टि गरेको छ।
मोटोरोला फाइदाजनक छ फेरि मोटोरोला वन र मोटो जीएक्स को लागी धन्यवाद
मोटोरोलाको राम्रो समयको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन फेरि यसको लाभदायक धन्यवाद यसको दुईवटा दायराका फोनहरूको सूचीमा छ।
मोटोरोला वन भिजन: एन्ड्रोइड वनको साथ दोस्रो उत्पादन आधिकारिक हो
मोटोरोला वन भिजन, एन्ड्रोइड वनको साथ ब्रान्डको दोस्रो पुस्ताको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ।
मोटोरोला वन भिजनका सबै सुविधाहरू र छविहरू छिद्रित स्क्रिनको साथ फिल्टर गरियो
मोटोरोला वन भिजनको बारेमा थप विवरणहरू र नयाँ रेन्डरहरू देखा पर्‍यो, जुन होल-पंच डिस्प्ले र एन्ड्रोइड वनको साथ आउँदछ।
मोटो जेड The का विशेषताहरु र विशिष्टताहरु यसको नयाँ चुहावटमा पुष्टि हुन्छ
नयाँ लीकले मोटोरोलाको लामो-प्रतीक्षित मोटो जेड from बाट लीक भएका सबै विशिष्टता र सुविधाहरू पुष्टि गर्दछ।
मोटो E6 का रेन्डरहरू फिल्टर गरियो, अर्को मोटरोला मोबाइल जुन कम दायरामा लड्नेछ
मोटो E6 रेन्डरहरू अब 91 १ मोबाइलले साझेदारी गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई एक विशेष हेराइ भएको दावी गरेका थिए। यसलाई अर्को हेर्नुहोस्!
मोटो Z4 र Z4 बल को विशिष्टता र मूल्यहरु को फिल्टर
विभिन्न विवरण र मोटो Z4 को मूल्य प्रकट भएको छ। यसका साथै मोटो जेड Force फोर्सको प्रमुख स्पेसिफिकेसन र मूल्य पनि चुहावट भयो।
मोटोरोला वन भिजनको पहिले नै प्रस्तुतीकरण मिति छ
हामीले मोटोरोला वन भिजनको बारेमा थाहा पाएको सबै कुरा पत्ता लगाउँनुहोस्, जसको प्रस्तुति मिति आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ।
यी रेन्डरहरूले मोटोरोलाको फोल्डिंग फोनको डिजाइन पुष्टि गर्दछ
मोटोरोलाको फ्लिप फोनको डिजाइन फुटेको छ। र अब हामी पुष्टि गर्न सक्छौं कि RAZR V4 यसमा हुने सामानहरू बाहेक कस्तो देखिन्छ।
मोटो Z4 पूर्ण रूपमा लीक भयो: स्न्यापड्रैगन 675, OLED स्क्रिन, २ MP MP सेल्फी क्यामेरा र अधिक
एक भारतीय प्रकाशनले हालसालै मोटो Z4 का मुख्य विशेषताहरू र सुविधाहरू साझा गर्‍यो, यसलाई खुला राख्यो।
मोटोरोलाले चाँडै नै Android One को साथ धेरै फोनहरू सुरुवात गर्नेछ
यस वर्ष मोटोरोलाको योजनाहरूको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन यस वर्ष चार नयाँ स्मार्टफोनहरू सुरू गर्नेछ जुन एन्ड्रोइड वनलाई अपरेटि system प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
मोटो G7 प्ले आधिकारिक तौर मा स्पेन आउँछ
स्पेनमा मोटो जी Play प्लेको सुरुवातका बारे थप जान्नुहोस्, जसले सम्पूर्ण दायरालाई आधिकारिक रूपमा खरीदको लागि उपलब्ध बनाउँदछ।
यो अवधारणाले हामीलाई मोटोरोलाको फोल्डिंग फोन कस्तो हुनेछ देखाउँदछ
हामी तपाईंलाई एक भिडियो रेन्डर देखाउँदछौं जसले हामीलाई मोटोरोलाको फोल्डिंग फोनको डिजाइन कस्तो हुन्छ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। ऊ सफल हुनेछ?
मोटोरोला P40 प्ले, यो फर्म को नयाँ सस्तो फोन को डिजाइन हुनेछ
हामी तपाईंलाई मोटोरोला P40 प्ले को डिजाइनको सबै विवरणहरू देखाउँदछौं, जुन रेन्डरमा देखा पर्दछ, साथ साथै एक भिडियो जसमा कल्पनामा एकदमै कम छोडिन्छ।
मोटोरोलाले फोनमा पूर्ण रूपमा नविकरण गरिएको डिजाइनको साथ काम गर्दछ
मोटोरोला एक नयाँ मोबाइल फोनमा काम गरीरहेको छ जुन पूर्ण रूपमा नविकरण डिजाइनको प्रस्ताव राख्दछ। हामी तपाइँलाई सबै विवरणहरू देखाउँदछौं, त्यहाँ एक भिडियो छ!
भिडियो समीक्षा मोटो G7, एक राम्रो एन्ड्रोइड टर्मिनल जसमा ठूलो त्रुटि यसको ब्याट्री हो
भिडियो समीक्षा र मोटो जीaको एक सुन्दर एन्ड्रोइड टर्मिनलको विश्लेषण जुन मेरो लागि ठूलो त्रुटि छ जुन यसलाई मध्य-दायरा क्षेत्रमा खडा गर्न अनुमति दिँदैन।
मोटोरोला वन भिजनको नयाँ रेन्डरले यसको छिद्रित स्क्रिन र MP 48 MP क्यामेराको पुष्टि गर्दछ
हामी हालसालै मोटोरोला वन दर्शनको बारेमा धेरै कुरा सुन्छौं। अब, एक आधिकारिक-खोजी वन दर्शन प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ।
मोटोरोलाको मोटो Z4 प्ले आउँदैछ - अब FCC प्रमाणीकरण प्राप्त गर्दछ
मोटोरोलाको आगामी मध्य-दायरा मध्ये एक, मोटो जेड Play प्ले, एक अमेरिकी नियामक एजेंसी एफसीसी बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।
मोटोरोला वन भिजन स्पेस लीकले MP 48 MP सेन्सर, २१: display डिस्प्ले र अधिक प्रकट गर्दछ
मोटोरोला वन दर्शन लीक भयो। यसको प्राविधिक विशिष्टताहरू र मुख्य विशेषताहरू खोलिएका छन्।
मोटोरोला वन भिजन Exekos 9610 XNUMX १० को साथ Geekbench टुर्स
मोटोरोला वन भिजन Geekbench प्लेटफर्ममा सामसु Ex Exynos 9610 40 १०१ चिपसेटको साथ देखा पर्‍यो। यो मोटोरोला PXNUMX हुनेछ।
मोटोरोलाले यो एक फोल्डेबल फोन हुनेछ पुष्टि गर्दछ
यस हप्ताको एक कार्यक्रममा पुष्टि भए अनुसार मोटोरोलाको फोल्डेबल फोन सुरूवात गर्नका लागि योजनाहरू बारे अधिक जान्नुहोस्।
यो मोटोरोला मोटो Mod 5G हुनेछ: यो FCC मा देखा पर्‍यो
G जी मोटो मोड एफसीसीमा देखा पर्‍यो। यसको बिभिन्न विवरणहरू अमेरिकी प्रमाणीकरण एजेन्सीको भर्खरको सूचीमा पत्ता लगाइएको छ।
मोटोरोला P40: हस्ताक्षरको पहिलो पंच-स्क्रीन फोन Exynos 9610 XNUMX१० SoC को साथ आउँदैछ
मोटोरोला P40 कम्पनीको पहिलो फोन हुनेछ एक छिद्रित पर्दाको साथ आउने। बदलेमा, तपाईंसँग Exynos 9610 XNUMX१० SoC हुनेछ।
२०१ M मोटो RAZR भिडियो र रेन्डरहरू लीक भयो: विवरण र डिजाइन प्रकट गरियो
मोटोरोलाको फोल्डेबल स्मार्टफोन, जुन "मोटो RAZR 2019" को नामबाट जान्छ, विभिन्न रेन्डरहरू र एक कन्सेप्ट भिडियो मार्फत लीक भएको छ।
मोटो जी Plus प्लस अन्ततः एन्ड्रोइड ओरियो पाउँदैछ: यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा शुरू भएको छ
मोटो जी Plus प्लसले पहिले नै एन्ड्रोइड ओरियो अपडेट प्राप्त गर्दै छ, किनकि यसले लामो समयदेखि पर्खिरहेको थियो।
भिडियोमा फोल्डेबल मोटोरोला RAZR को डिजाईन डिजाइन भयो
यो नविकृत फोल्डेबल मोटोरोला RAZR को डिजाइनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् यस कन्सेप्ट भिडियोको अनुसार यो तपाईंलाई कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ।
मोटो G7 प्ले र मोटो G7 पावर: फर्मको दुई नयाँ सस्तो मध्यम दायरा
मोटोरोलाको नयाँ मिड-रेंजको बारेमा मोटो जी Power पावर र मोटो जी whose प्लेको साथ अधिक जानकारी लिनुहोस् जसको विनिर्देशहरू, मूल्य र सुरुवात आधिकारिक छन्।
मोटो G7 र मोटो G7 प्लस: मोटोरोलाले यसको मिड-रेन्ज नवीकरण गर्‍यो
मोटो G7 र मोटो G7 प्लसको विशिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज मिति पत्ता लगाउनुहोस् जुन मोटोरोलाले आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिसक्यो।
मोटो Z4 प्ले चश्मा लीक भयो: MP 48 MP सेन्सर, SD675 र अधिक खुलासा
एक भारतीय पोष्टले मोटो जेड Play प्ले विशिष्टतामा महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा गरेको छ, एक विश्वसनीय अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै।
मोटोरोला मोटो G7 यसको विशिष्टता साथ TENAA मा लीक भएको देखिन्छ
TENAA मा मोडेल नम्बर 'XT1965-6' को साथ नयाँ मोटोरोला फोन देखा पर्‍यो। यो मोटो जी or वा जी Plus प्लसको चिनियाँ संस्करण हो।
मोटो G6 र मोटो G6 प्ले एन्ड्रोइड पाई को बीटा प्राप्त गर्न शुरू
जबकि मोटोरोला मोटो G7 श्रृंखला केवल कुनामा छ, मोटोरोला बिर्सिएको छैन ...
कथित आधिकारिक लिस्टिंगले मोटो G7 श्रृ series्खलाको पूर्ण विवरण लीक गर्दछ
लेनोवोको आगामी मोटो G7 श्रृंखला को लागी विशिष्ट विवरणहरु को आधिकारिक सूची लीक भएको छ। यसको मुख्य सुविधाहरू प्रकट भएको छ।
मोटो G7 सँग पहिले नै एक प्रस्तुतीकरण मिति छ
मोटोरोला मोटो G7 को प्रस्तुतिको मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा फेब्रुअरी Brazil मा ब्राजिलमा प्रस्तुत हुनेछ।
एउटा प्याटेन्टले मोटो RAZR को डिजाइन देखाउँदछ, मोटोरोलाको पहिलो फोल्डिंग फोन
चुहाएको पेटेन्टले हामीलाई मोटोरोलाको फोल्डेबल फोनको डिजाइन देखाउँदछ, लामो-प्रतीक्षित मोटो RAZR फोल्डेबल जुन MWC २०१ at मा खोलिनेछ।
मोटो G7 प्ले बोर्डमा स्नैपड्रैगन 625२। को साथ Geekbench मार्फत जान्छ
मोटो G7 प्ले बोर्डमा अष्ट-कोर स्नैपड्रैगन 625२632 को साथ Geekbench मा लीक भएको छ। यो SDXNUMX को साथ आउने आशा गरिएको थियो।
मोटो जी Power पावर र अन्य विवरणहरूको प्रत्यक्ष फोटो लीक गरियो
मोटो जी Power पावरको वास्तविक प्रत्यक्ष फोटोहरू यसको सम्भावित ब्राजिलियन मूल्यको साथ प्रकाशमा आएको छ। विवरणहरू जान्नुहोस्!
मोटो G7 श्रृंखला को नयाँ रेन्डरहरु लीक भयो: मूल्यहरु पनि खुलासा
लेनोवोको आगामी मोटो G7 श्रृंखला को लागी नयाँ रेन्डर र मूल्य निर्धारण लीक भयो। हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं!
मोटोरोला P40 र मोटो Z4 प्ले तिनीहरूका रेन्डरहरू मार्फत फिल्टर गरियो
मोटोरोला P40 र मोटो Z4 प्ले डिजाइन तिनीहरूको चश्मा संग गत हप्ता लीक भयो ...
मोटो G6 प्लस एन्ड्रोइड पाई अपडेट गर्न सुरू गर्दछ
भारतमा आधिकारिक रूपमा मोटो जी Plus प्लसको लागि रोल आउट गर्न सुरू हुने एन्ड्रोइड पाई अपडेटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
मोटोरोला मोटो G7 डिजाइन पुष्टि भयो
एक रेन्डर लीक भएको छ जसले मोटोरोला मोटो G7 को डिजाइन देखाउँदछ, मोटोरोला जी परिवारको अर्को फ्लगशिप जुन पर्दामा निशान हुनेछ।
मोटो G7 रेन्डर र लीक सुविधाहरू: लेआउट र रंग खुला
मोटोरोलाको मोटो G7 श्रृंखला नजिकै आउँदैछ। यस अवसरमा, यस नयाँ परिवारको चार मोडेलहरूका रेन्डरहरू चुहावट भयो।
मोटोरोला क्यामेरा अनुप्रयोगमा पछिल्लो अपडेट कसरी स्थापना गर्ने: यो समाचारको साथ लोड आउँदछ
मोटोरोला क्यामेरा अनुप्रयोग नयाँ सुविधाहरू सहित लोड गरिएको नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गरियो, जसले नयाँ सुविधाहरू र प्रकार्यहरू समावेश गर्दछ।
मोटो G7 पावर 5000००० एमएएच ब्याट्री र अधिकको साथ प्रमाणित छ
मोटोरोलाको मोटो G7 पावर FCC cer,००० mAh ब्याट्री पावर र अधिकको साथ प्रमाणित छ। सबै विवरणहरू पत्ता लगाए जस्तो।
मोटोरोला वनलाई Android Pie पाईमा कसरी अपडेट गर्ने
नयाँ Google ओएसको फाइदा लिन मद्दत गर्न एन्ड्रोइड Pie पाई प्राप्त गर्ने पहिलो मध्य दायरा मध्ये एक भएर मोटोरोला वन आश्चर्यचकित हुन्छ।
मोटोरोला वनले मेक्सिकोमा एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गर्न थाल्छ
एन्ड्रोइड Pie.० पाई पहिले नै मेक्सिकोको मोटोरोला वनमा अपडेटको माध्यमबाट आउँदैछ जुन नोभेम्बर सुरक्षा प्याचको साथ आउँदछ।
मोटो Z4, पहिलो विवरण प्रकट भयो
मोटो जेड of को पहिलो सुविधाहरू लीक भएको छ, अमेरिकी फर्मको अर्को फ्ल्यागशिप जुन यसको स्नैपड्रैगन4855 प्रोसेसरको लागि बाहिर खडा हुनेछ।
मोटोरोला मोटो वन अब संयुक्त राज्यमा उपलब्ध छ
मोटोरोला मोटो वन अब संयुक्त राज्यमा उपलब्ध छ। यसको मूल्य र उपलब्धता को विवरण जान्नुहोस्।
मोटोरोलाले आफ्नो पहिलो वायरलेस चार्जर दर्ता गर्दछ
मोटोरोलाले सुरूवात गरिरहेको वायरलेस चार्जरको बारेमा थप खोजी पाउनुहोस्, यसको पहिलो वायरलेस चार्जिंग फोनको साथ।
के तपाई सस्तो मोबाइल किन्न चाहानुहुन्छ? यी मोटोरोला प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्
मोटोरोलाले अमेजनमा केही प्रस्तावहरू दिएर घर झ्याल बाहिर फ्याँक्यो जुन हामीलाई सस्तो मोबाइल किन्नको लागि अनुमति दिन्छ: मोटो जी5११ 115 भन्दा कममा।
निर्माता मोटोरोलाले भर्खरै एन्ड्रोइड ओरियो .8.1.१ मा यसको मोटो जी and र मोटो जी Plus प्लस मोडेलहरूको अपडेट जारी गरेको छ।
मोटो G7 को डिजाइन एक revealed 360०-डिग्री भिडियो रेन्डर को लागी धन्यवाद प्रकट भयो
मोटो G7 360 6०-डिग्री भिडियो रेन्डरमा देखा पर्‍यो। GXNUMX को उत्तराधिकारी को डिजाइन को बारे मा अधिक जान्नुहोस् केहि महीना पहिले।
मोटो G7 दायरामा चार फोनहरू सामेल छन्
मोटोरोलाले मोटो जी range दायरामा चार फोनहरू सुरूवात गर्दछ। अर्को वर्षको लागि हस्ताक्षर फोनहरूको यो दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
मोटोरोला मोटो वन स्पेन आइपुग्छ
मोटोरोला मोटो वन आधिकारिक रूपमा स्पेन मा शुरू गरिएको छ। ब्रान्डको मध्य-दायरा फोनको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
मोटोरोला वन पावर पूर्ण रूपमा चुहावट भयो
मोटोरोला वन पावरको पूर्ण विवरणहरू फिल्टर गरियो। एन्ड्रोइड वनको साथ पहिलो मोटोरोला फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
मोटोरोला RAZR: यो ब्रान्डको फोल्डिंग फोन हुनेछ
मोटोरोलाको नयाँ फोल्डेबल फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्, जुन RAZR नाम अन्तर्गत आउँदछ। रेट्रो शैलीको साथ एक फोल्डेबल फोन।
मोटोरोला वन TENAA मार्फत जान्छ र यसको डिजाइन र सुविधाहरू प्रकट गर्दछ
मोटोरोला वन भर्खर TENAA को भ्रमण गर्यो। यस फोनको खुलासा गरिएको डिजाईन र सबै सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
लीक गरिएको मोटोरोला वन सुविधाहरू: ओएस, र्याम, र प्रोसेसर गति खुला
मोटोरोला वन भर्खर आफ्नो Geekbench मा देखा परेको छ केही प्रमुख टेक्निकल चश्मा संग। जान्नुहोस् कि यस मोबाइलको साथ आउँनेछ!
नयाँ छविहरू र मोटोरोला वन पावरको विशेष विवरणहरू
मोटोरोला वन पावरमा नयाँ लीक स्पेसिफिकेसन। ब्रान्डको नयाँ एन्ड्रोइड वन फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
मोटो P30 आधिकारिक हो: मोटोरोलाको पहिलो निशान फोन
मोटो P30: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज प्रस्तुत गरिएको मोटोरोलाको पहिलो खाच फोनको बारे थप जान्नुहोस्।
मोटोरोला मोटो P30 को पहिलो रेन्डरिंग फिल्टर गरियो। उनीहरूलाई धन्यबाद छ हामीसँग फोनको डिजाइनको स्पष्ट विचार छ जुन ठूलो खाचमा हुन्छ।
नयाँ मोटो P30 अगस्त १ on मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
मोटोरोलाले अगस्ट १ 30 मा मोटो P15s प्रस्तुत गर्ने छ। ब्रान्डबाट फोनको यस नयाँ दायराका बारे थप जान्नुहोस्, जुन छिट्टै आउँनेछ।
मोटोरोलाले मोटो मोडहरू छोड्दैछ
मोटोरोलाले मोटो मोडको विकासलाई छोड्ने छैन। कम्पनीको पुष्टिकरणको बारेमा अधिक फेला पार्नुहोस् कि यसले मोड मोडमा कार्य गर्न जारी राख्दछ।
घोषणा: यस बर्षको लागि मोटो Z फोनहरू हुनेछैनन्
मोटोरोलाले भर्खर घोषणा गरेको छ कि यस बर्षमा मोटो Z उपकरणहरू छैनन्। यो मोटो Z3 को प्रस्तुतीकरणको केही समय पछि घोषणा गरिएको छ।
मोटोरोलाले मोटो जेड int को साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र मोटो मोड3जीको लागि प्रक्षेपण गर्दछ
मोटो जेड officially लाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, हामी तपाईंलाई सबै विवरणहरू दिन्छौं, पक्षमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र G जी नेटवर्कको लागि मोटो मोड।
मोटो Z3 अगस्त २ मा प्रस्तुत गरिनेछ
मोटोरोला मोटो Z3 औपचारिक २ अगस्तमा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। फाईलिंग मिति कम्पनी द्वारा छनौटको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
TENAA बाट पार गरिसकेपछि मोटोरोला वन पावरको मुख्य विशेषताहरू
मोटोरोला, केही वर्ष पहिले लेनोवो द्वारा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले हामीलाई नयाँ उपकरणमा परिचय दिन लागेको छ: मोटोरोला वन पावरको मोटोरोला वन पावरको अर्को मध्य-दायरा टेनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। यस मध्यम-दायरा उपकरणको आधिकारिक विशेषताहरूका बारे थप जान्नुहोस्।
मोटो सी २ र सी २ प्लस पहिले नै प्रमाणित भइसकेका छन्
मोटो C2 र C2 प्लस ब्राजील मा प्रमाणित गरीएको छ। ब्रान्डका नयाँ मोडेलहरू बारे अधिक जानकारी लिनुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
मोटो E5 प्ले एन्ड्रोइड गोको साथ युरोप आइपुग्छ
मोटो E5 प्ले एन्ड्रोइड गोको साथ युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा सुरू हुन्छ। नयाँ कम-अन्त मोटोरोलाको आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
मोटो Z3 प्ले अगस्ट मा स्पेन मा शुरूआत हुनेछ
मोटो Z3 प्ले: स्पेनमा मूल्य र सुरू मिति पुष्टि भयो। स्पेनमा मोटोरोला फोनको सुरुवातका बारे थप जानकारी लिनुहोस्।
मोटोरोला वन को नयाँ छविहरु लीक छन्
मोटोरोला वनका नयाँ फोटोग्राफहरू दृश्यमा देखा पर्दछन्, अब सेतो रंगको पहिरनमा। के यो उपकरणको अर्को संस्करण हुनेछ?
भिडियो समीक्षा मोटो G6, King राजाको फिर्ती
मोटोरोलाले २ अगस्तको लागि घटनाको घोषणा गर्‍यो
मोटोरोलाले अगस्त २ मा नयाँ फोनहरू परिचय गराउनेछ। फर्मले अगस्ट महिनाको लागि तयार गरेको घटनाको बारेमा थप खोज्नुहोस्।
मोटोरोला वन पावरका नयाँ लीक छविहरूले यसको डिजाइन विस्तृत रूपमा देखाउँदछ
हामी तपाईंलाई मोटोरोला वन पावरको डिजाइनको नयाँ विवरणहरू देखाउँदछौं जुन आज चुहावट भयो
मोटोरोलाले फ्लिप फोनहरूको लागि समाधान प्रस्तुत गर्दछ
मोटोरोलाले फोल्डिंग स्क्रीनहरूको विरूपण फिक्स गर्दछ। फोल्डिंग फोनहरूको लागि कम्पनीको मूल समाधानको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
मोटो सी २ एन्ड्रोइड गोको साथ पहिलो मोटोरोला फोन हुनेछ
मोटो सी २: एन्ड्रोइड गोको साथ पहिलो मोटोरोला फोन। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस् जुन कम-अन्तमा हिट हुनेछ।
नयाँ मोटोरोला वन पावर लीकले यसको स्पेसिफिकेशन्स प्रकट गर्दछ
मोटोरोला वन पावर अब फेरि आधिकारिक विशेषताहरु देखा पर्दछ, हामी यहाँ तपाईलाई भन्छौं।
मोटो Z3 प्ले: मोटरोलाको नयाँ मध्य-दायरा
मोटो Z3 प्ले: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारे अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन मध्य दायरामा पुग्छ र योसँग मोटोरोलाले यस खण्डलाई नविकरण गर्दछ।
नयाँ तस्बिरहरू र मोटोरोला वन पावरको स्पष्टीकरण
मोटोरोला वन पावर: लीक छविहरू र विशिष्टताहरू। ब्रान्डको पहिलो फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस् यसको एकको ऑपरेटिंग प्रणालीको रूपमा एन्ड्रोइड वन प्रयोग गर्न।
मोटोरोला वन पावर: एन्ड्रोइड वनको साथ ब्रान्डको नयाँ फोन फिल्टर गरियो
मोटोरोला वन पावर: एन्ड्रोइड वनको साथ नयाँ फोन। कम्पनीको नयाँ उपकरणको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन अपरेटिंग सिस्टमको यो संस्करण प्रयोग गर्दछ।
मोटो Z3 प्ले को नयाँ छवि लीक भयो
मोटोरोला मोटो Z3 प्ले को दुई नयाँ चित्रहरु फिल्टर। ब्रान्डको नयाँ उच्च-एंड फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्, जसको पहिलो छविहरू पहिले नै चुहावट भयो।
मोटो १ एस एसडी 1० को साथ चीनमा सुरू गरिएको छ
लेनोवोको कम्पनी मोटोरोलाले भर्खर चीनमा नयाँ मोटो १ एस सुरू गरिसक्यो, टर्मिनलले फाइदा भएको टर्मिनल जसले मोटो जी Play प्ले र मोटो जी Plus प्लसको साथ गत महिना सुरु गरेको मोटो जी of लाई सम्झाउँदछ।
मोटोरोलाले ट्याब्लेटमा परिणत हुने फोल्ड फोनलाई पेटन्ट गर्दछ
मोटोरोलामा फोल्ड योग्य फोनको लागि पेटन्ट छ। यस पहिले नै दर्ता गरिएको प्याटेन्टमा ट्याब्लेट बन्नको लागि ब्रान्डको पहिलो फोल्डिंग फोनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्
मोटोरोला मोटो G6 स्पेनमा अब उपलब्ध छ
मोटो G6 आधिकारिक रूपमा स्पेनमा खरीद गर्नका लागि उपलब्ध छ। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन हाम्रो देशमा पहिले नै सुरू गरिएको थियो।
मोटोरोलाले मोटो जी of को million करोड युनिटहरू बेच्ने आशा गर्‍यो
मोटोरोलाले मोटो जी6करोड units० लाख युनिटहरू बेच्ने आशा गर्‍यो। कम्पनीको यसको नयाँ फोनहरूको लागि बिक्री अपेक्षाको बारे अधिक जान्नुहोस्।
मोटो E5, E5 प्लस र E5 प्ले: मोटोरोलाको प्रवेश सीमा सुधार
मोटो E5, E5 प्लस र E5 प्ले: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज आधिकारिक अनावरण गरिएको फर्मबाट यो नयाँ प्रविष्टि दायराको बारे अधिक जान्नुहोस्।
मोटोरोला मोटो G6, G6 Plus र G6 प्ले: मध्य दायरा नविकरण गरियो
मोटो G6, G6 प्लस र G6 प्ले: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा सबै विवरणहरू फेला पार्नुहोस् जुन आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भैसकेको छ।
नयाँ लीकले मोटो जी Plus प्लसको डिजाइनको पुष्टि गर्दछ
मोटो जी Plus प्लसको छविहरूको नयाँ चुहावटले अघिल्लो चुहिएको डिजाइनको पुष्टि गर्दछ।
अप्रिल १ On मा, नयाँ मोटोरोला मोटो G19 परिवार प्रस्तुत हुनेछ
मोटोरोलाले ब्राजिलको साओ पाउलोमा यो अप्रिल १ take मा हुने एउटा प्रक्षेपण कार्यक्रमको निम्तो दिएर घोषणा गर्‍यो, जुन धेरै अफवाहमा रहेको मोटोरोला मोटो जी of को प्रस्तुतीकरण हुनसक्दछ। हामी तपाईंलाई विवरणहरू दिन्छौं!
मोटोरोला मोटो G6 र G6 प्ले पूरा चुहायो
मोटो G6 र G6 प्ले: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र डिजाइन लीक भयो। यस ब्रान्डको नयाँ फोनहरू बारे अधिक खोज्नुहोस् जुन चाँडै नै सुरूवात हुन गइरहेको छ तर जसको हामीलाई डिजाइन र उनीहरूको विशेषताहरू थाहा छ।
मोटो Z3 प्ले को डिजाईन र विशिष्टता फ़िल्टर गरियो
मोटो Z3 प्ले को विशिष्टता र डिजाइन फिल्टर। यस ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन बर्षमा यस बर्षमा बजारमा शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मोटो G6 मूल्य र पछिल्लो चुहावट चश्मा
VLEAKS ले अमेजन-पृष्ठमा मोटो G6 को एक स्क्रिनशट ल्याउँदछ जुन यस मोबाइललाई हटाउन अघि धेरै छोटो समयको लागि लीकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको थियो - जसले यस मोबाइलका अन्य धेरै सुविधाहरू दर्साउँदछ जसमा हामी मध्ये धेरैले पुष्टि गरिसकेका छन तपाईंलाई जानकारी गरायो। हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं!
अप्रिल सम्म हामी २०१ of को नयाँ मोटोरोला देख्नेछैनौं
एसियाली कम्पनी मोटोरोलाले २०१ April को लागि नयाँ अप्रिलका उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्नेछ, अर्को अप्रिल, जहाँ मोटो जी श्रृंखला यसको मुख्य आकर्षण हुनेछ।